Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha – Oromedia
Home » Siyaasaa » Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha
Sadaasa 9 bara 2005 waggaa 11n dura guyyaa dhaabni qabsoo bilisummaa Oromoo adda durummaan gaggeessaa turee fi jiru ABOn Ummanni Oromoo keessumaa ilmaan isaa qeerroon akka gamtaan ka’anii mirga abbaa biyyummaa, hiree ofii, ofiin murteeffachuuf falamatan, akka mirga abbaa biyyummaaf FDG walirraa hin cinne gaggeessan guyyaa waamicha itti dhiheesse, ykn FDG itti labseedha.
Gaafa waamichi ykn labsiin FDG kun itti labsamee booda kan baroota dheeraaf gabrummaa jala turee fi qabsoo walirraa hin cinne karaa gurmaayee fi karaa adda addaatin gaggeessaa ture ummanni Oromoo keessumaa qeerroon Oromoo FDG murna gabroonfattuu Wayyaanee irratti finiinsuu eegale. Baddaa-gammoojjitti, magaalaa- baadiyyaattii, dhiiraa dubartiin, xiqqaa-guddaan diddaa isaa itti fufuudhaan qabsoo hidhannoo gotichi WBOn gaggeessu cinaatti diina dhiphisuu eegalan.
Inni tokko jedhe; lama jechuun waan hin oolleef , FDG waggoota 11n dura waamicha ABOn taasiseen eegale sun kunoo injifannoorratti injifannoo galmeesisaa har’a gaheera. FDG irraayis gara FXGtti cehee Wayyaanee waggoota 25n darbaniif nugoolaa fi nusaamaa turte kufaatii jalaan gaheera. Ummanni Oromoo keessumaa barattoonni dhaabolee barnootaa sadarakaa godaarraa kaasee amma Yunivarstiitti baratan FDG kana walirraa fuudhuun sadarakaa har’a qabsoon Oromoo irra jiru kanaan gahaniiru.
Gaafii mirga abbaa biyyummaa, gaafii hiree ofii ofiin murteeffachuu, qabsoo dhugaa, qabsoo haqa ofii deeffachuu ummanni Oromoo barootaaf itti jiru kana; kuun harka duwwaa qalama qabatee waraana diinaa dura dhaabbachuun, kuun ammoo ogummaa Artii qabuun , kuunis fiigee yeroo injifatee galutti diddaa sirna wayyaaneef qabu argisiisuun, kan hafe ammoo beekumsaan, qabeenyaa fi dandeettii qabu maratti fayyadamee diinni akka baaragu,addunyaan akka quba qabaatu taasisaniiru. Keessumaa Sirni gabroonafataan abbaa irree Wayyaaneen akka dirqamee wal laaqu, waan qabee gadi dhiisu dhabu taasisuun waan amma Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti argaa jirru kana akka arginu taasisaniiru. Kun Injifannoo safaramee hin dhumneedha.
FDG Sabboontoonni Barattoonni Qeerroon Oromoo, manneen barnootaa sadarakaa gadirraa amma Yunivarstiilee akka Jimmaa, Adaamaa, Finfinnee, Amboo, Haramaayaa fi kanneen birootin eegalame kun babbalatee barattoonni yunivarstiilee Oromiyaa keessa jiranii fi manneen barnootaa sadarakaalee adda addaa hirmaachisee achirraayis gara guutuu ummata Oromootti cehee kunoo har’a FXGti cehe finiinaa jira.
Sabboontonni qeerroon Oromoo FDG waggaa 11n dura waamicha ABOn taasise hordofanii eegalan har’as qabsoo injifannoolee gara garaa galmeesisaa gara FXGti cehe kana wareegamaa qaalii kaffalaa adda durummaadhaan gaggeessaa jiru. Sirna gabroonfattuu ummata Oromoo waggoottan 25n darbaniif saamaa, ajjeesaa fi dararaa akkasumas biyyaa godaansisaa turte tanatti xumura gochuuf kuffisanii kufaa jiru. Qeerroon Oromoo hidhaa, ajjeechaa fi dararaaf osoo hin jilbiiffatin inni tokko yoo kufu inni biraa itti darbaa qabsoo Oromoo, qabsoo haqaa, qabsoo mirga abbaa biyummaa, qabsoo hiree ofii ofiin murteeffachuu finiinsuun akka eenyufuu ifa ta’eetti kunoo balabala bilisummaarran gahaniiru.
Qabsoon manneen barnootaa adda addaa keessatti keessumaa ammo Yunivarstootaa fi koleejootoota keessatti nyaata dhaabuun, hiriira gaggeessuun, mormii adda addaa dhageesisuun eegale sun, gara daandii kutuu, dhaaboolee murna gabroonfattuu Wayyaanee gubuu, waraana Wayyaanee fi lukkeelee diinaa naannoo Oromiyaatii hari’anii baasuu fi adabuutti cehee kunoo sirnichi dhiphuurraa ka’ee labsii yeroo hatattamaa baasee biyya bulchiinsa waraanaa jala jirti. Mootummaan baatilee muraasa dura ummanni biyyattii waan najaalateef kunoo 100 fi dhibbaan filatame jedhee humnaan paarlaamaa biyyattii dhuunfate har’ammoo mormiin natty ka’e jedhee ministeeroota erga muudamanii waggaa hin guutiin kaasee kan biraa muude. Gaafiin ummata Oromoo kana ta’uu baatus maddi isaa garuu FXG ummanni Oromoo gaggeessaa jirruudha. Kunis injifannoodha.
Kan FXG ummata Oromoo keessumaa ammoo sochii qeerroo Oromoo Kanaan baragee fi muddame murni gabroonfataa Wayyaanee guyyaa FDG kun eegaleerraa kaasee amma har’aatti sabboontoota, barattoota, qeerroo Oromoo adamsee hidhuu, dararuu fi ajjeesun qabsoo Oromoo kana dhaasuuf yaaluus hin milkoofne. Qabsoon hin dhaabbanne. FDG gara FXGtti cehee, ittuu cimee kunoo dhiiga keenyaan injifannoorratti injifannoo galmeessisaa jirra. Galanni kan qabsaawoota dhiiga isaanii dhangalaasaa turanii fi jiranii haa ta’uutii kunoo dinni dhiphatee, Oromoon ammo qabsoo ilmaan isaatin gammadaa jira, qabsoo caaluufis bakka jirutti allaa manatti wal ijaaree socho’aa jira. Kaayyoo gotoonni darbaa dabrsaan irratti kufaa turanis mirga abbaa biyyummaa galamaan gahuuf kutatee FXG eegale finiinsaa jira. Kunis Injifannoodha!
Egaa Sadaasa 9 Waggaa 11ffaa Guyyaa FDG ABOn itti labsame ykn waamichi itti dhihaatee fi sabboontoonni daraggoonni Oromoo waamicha kana hordofanii qabsoo hadhooftuu murna gabroonfataa wayyaanee irratti itti eegalan yoo yaadannee ollu kan ta’uu qabu injifannoolee keenya kunuunfachaa isa hafeef waada keenya haaroomsaa, qabsoo caaluuf wal ijaaraa ta’uu qaba.
Sadaasi 9 kan bara 2016 waggaa 11n guyyaan FDG itti labsame; jala bultii isaa sadaasa 8 bara 2016 irraa eegalee biyya keessaa fi bakka hawaasi Oromoo argamu maratti sagantaa adda addaatin akka yaadatamee oolu karoorri bahe ni muldhisa. Kanumaan wal qabatee Hundii keenyaa bakka sirna kana itti gaggeessinutti kan wal yaadachiisuu qabnu; adaraa, ykn imaanaa gottoota sabboontoota qeerroo kufanii gaafii ummata Oromoo, gaafii mirga abbaa biyyummaa dhiiga isaanii irratti gadi naqan, lafee isaanii irratti caban galamaan gahuuf waadaa keenya Haaromsuu dha. Goota yaadachaa kaayyoo goonni kuffeef galmaan gahuuf caalaatti hojjechuudha. Kan hunda dursuu qabu holola diinaaf gurra kennuu dhiisanii FDG waggaa 11 dura adda duree qabsoo Oromoo ABOn labsamee kan hara’a dhiiga qeerroo Oromootin FXG cehe Fiixa baasuuf hojjechuudha. Isa santu imimmaan Oromoo haqa, isa santu dhiiga gootoota keenyaatti kabaja hora.
Kabajaa fi ulfina bara baraa qabsaawoota keenyaaf!
*Baarentuu Gadaa emial: gessogeda@gmail.com dhaqqabuu dandeessu.
Previous: Waliigaltee Dadhabbii Malee Gatii Hin Qabne
Next: DHIIGNI QEERROO KAARDII UMMATA ITTIIN SOSSOBANII MITI!